musha » musha » Hashrate
Izwi rekuti hash rate rinoreva kumhanya uko komputa inokwanisa kuita hashing masvomhu.
Muchirevo cheBitcoin uye cryptocurrencies, iyo hash mwero inomiririra mashandiro uye mashandiro emuchina wemigodhi: iyo hashrate inotsanangura kukurumidza kwemigodhi Hardware inoshanda kana ichiedza kuverenga iyo hashi yeyakavimbika block.
Fungidzira izvi: maitiro ezvicherwa anosanganisira zviuru zvezvizhinji zvisina kubudirira kukundwa kwekuyedza, kudzamara hashi inoshanda yagadzirwa. Saka mugodhi weBitcoin anoda kumhanyisa boka re data kuburikidza nebasa rehash kuti abudise hashi, uye achangobudirira chete kana hashi ine imwe kukosha (hashi inotanga neimwe nhamba yemazero) inogadzirwa.
Naizvozvo, chiyero chehash chakanangana zvakananga nekubatsira kwemugodhi kana dziva revacheri. A yakakwira hash mwero zvinoreva izvozvo mukana wekutora bhuroka wakakwirira uye semhedzisiro iye mugodhi ane mukana uri nani wekugamuchira mubairo wemubato.
Chiyero che hash (hash rate) inoyerwa muheshes pasekondi (h / s) pamwe neyekutanga system system, senge Mega, Ggiga, kana Tera. Semuenzaniso, blockchain network iyo inoita imwe trillion hashes pasekondi ingangove ine hash mwero we1 Th / s.
Bitcoin's hash rate yakasvika 1 Th / s muna 2011, uye 1.000 2013 Th / s muna 1.000.000. Mumatanho ekutanga enetiweki, vashandisi vaigona kuchera mabhuroko matsva vachishandisa makomputa avo uye makadhi emifananidzo. Asi nekugadzirwa kwehunyanzvi hwekuchera michina (inozivikanwa seMiner ASIC: Kunyorera-Yakanangana Yakabatana Seketi), iyo hash mwero yakatanga kuwedzera nekukurumidza, zvichikonzera kuoma kwemigodhi kuwedzera. Nekudaro, ako ega makomputa uye magiraidhi makadhi haachakwanise kune Bitcoin kuchera. Mwero weBitcoin wehash wakapfuura chiuru chezviuru zveTh / s muna2016, uye zviuru gumi zvezviuru zveT / s muna 10.000.000. Kubva munaChikunguru 2017, network iri kumhanya panosvika 2019 Th / s.